Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. देश/समाज – Emountain TV
काठमाडौँ, १६ चैत । कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएकी बागलुङ नगरपालिकी १७ वर्षीया युवतीलाई धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा ल्याएर उपचार थालिएको छ । घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी युवतीलाई कोरोना पुष्टि भएसंँगै…
काठमाडौँ, १६ चैत । कोभिड-१९ को उपचारका लागि निश्चित पद्धति र भ्याक्सिनको निक्र्याेल नभएको अवस्थामा नेपाल र चीनका स्वास्थ्यकर्मीले रोगको उपचार र रोकथामका विषयमा एकअर्काका अनुभव तथा तयारीबारे छलफल गरेका छन्।…
काठमाडौँ, १६ चैत । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी जोखिम न्यूनिकरणका लागि देशव्यापी लकडाउन भएको प्रतिकूल अवस्थामा उपचार नपाएर तीन बालिकाको ज्यान गएको छ। काठमाडौंका दुई र सर्लाहीका एकजना…
काठमाडौँ, १६ चैत । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले अत्यावश्यक सेवाका खाद्य सामग्री र ग्यास अभाव हुने नगरवासीका घरघरमा सवारीमार्फत सेवा पु¥याउने भएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले लक डाउन गरेको चौथो…
दार्चुला, १५ चैत । भारतको धारचुलामा ३ दिनदेखि अलपत्र परेका २ सय ६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । कामको सिलसिलामा भारतको विभिन्न सहरहरुबाट आएका २ सय ६ जना नेपालीहरुलाई…
पर्सा, १५ चैत । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बन रक्षक टोली र जनावर तस्कर बिच दुई तर्फी गोली हानाहान भएको छ । दोहोरो गोली हानाहानमा १ जना तस्करको मृत्यु भएको छ, भने…
काठमाडौँ, १५ चैत । कोरोना भाइरसबारे भ्रम फैलाउने ३ वटा वेवसाइट बन्द गराइएको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार ३ वटा वेबसाइट बन्द गराइएको छ भने ३ वटालाई आपत्तिजनक…
नेपालगञ्ज, १५ चैत्र । नेपाल एयरलाइन्सको विमान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको छ । धावनमार्गबाट चिप्लिएको जहाज विमानस्थलको घाँसे मैदानमा पुगेर अड्किएको हो । काठमाडौंबाट बिरामीहरुको संकलित स्वाबको नमुना लिन…
बर्दिया, १४ चैत । भारतबाट फर्किएका ८४ जनालाई बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थानका क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ । कोरोना संक्रमण हुनसक्ने र फैलन सक्ने हुनाले उनिहरुलाइ क्वारेन्टाईनमा राखिएको हो । भारतबाट आएका…
काठमाडौँ, १४ चैत । महावीर पुनले कोरोना भाइरसको उपचार गर्न चिकित्सकले लगाउने पोशाक ‘व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण’ (पिपिई) निःशुल्क उपलब्ध गराउने हुनुभएको छ । बिहीबारदेखि पिपिई बनाउन थाल्नुभएका पुनले सरकार र अस्पताललाई…